:: My Little World ::: ပုဇွန် ၀က်နံရိုး ခေါက်ဆွဲ
Posted by Nay Nay Naing at 9/23/2008 02:23:00 PM
I think you should try at home. You can buy easily those stuffs. Just need to mix at home after minimal heating. Yes when I was in Burma, everything difficult. here all are ready, already cleaned and packed. sure similar thing in Singapore.
Btw, You know that great cooks are only men in the world:)
Tuesday, September 23, 2008 5:59:00 PM
နံမည်လေး ဖတ်ပြီးကို စားချင်လွန်းလို့ ကိုAndy ဘလော့ဂ်ကနေ လိုက်လာတယ်။ ပုံကိုကြည့်ပြီး သွားရည်ကျသွားတယ်။
never try myanmar dan pauk near hindu temple?
တစုံတစ်ယောက်က စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုးစား ချက်ကျွေးမိမလား။တဲ့။
Wednesday, September 24, 2008 3:05:00 AM
အနံ့သိပ်မနံပဲ စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုင်နာမည်လေးပါညွှန်းပေးပါဦးနော်... ဘယ်လိုသွားရတယ်ဆိုတာလေးပါ ရေးပေးပါ.. :D
Steve Evergreen >> အခုလက်ရှိ နေတဲ့ အိမ်မှာ ဘာမှချက်မစားဖြစ်သလောက်ပါပဲ။ ချက်ခွင့်ရှိပေမယ့် မီးဖိုက ကျဉ်းလို့တော်ရုံမီးဖိုထဲ မ၀င်ဖြစ်တော့ဘူး။ ကိုယ်တိုင်ချက်စားကြည့်ဖို့အကြံပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ။ ယောက်ျားလေးတွေ ဟင်းချက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို သူတို့ ချက်တဲ့ဟင်းတိုင်းနီးပါးက အရသာရှိတယ်၊ ဟင်းချက် အရမ်းကောင်းတယ် ဆိုတာတော့ ထောက်ခံတယ်။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းယောက်ျားလေး အတော်များများ ဟင်းမျိုးစုံကို အရသာရှိရှိချက်တတ်ကြတယ်။ ဟင်းချက်တာက အိုးကြီးချက်တို့အထက်မီးအောက်မီးနဲ့ ချက်တာတို့ ဆို ယောက်ျားတွေမှ အားအင်အပြည့်နဲ့လုပ်နိုင်တာ။ ယောက်ျားလေးတွေက အပင်ပန်းခံနိုင်သလို ၊ အရသာခံလည်း ကောင်းကျ၊ အကောင်း ကြိုက်ကြတာလည်း များသယ်လေ။ ကျွန်မ ဆို စာဖိုမှူးလုပ်ဖို့ မပြောနဲ့ကိုယ်စားဖို့ အတွက် ဟင်းတခါချက်ပြီးရင်တောင်မှ မောနေတာနဲ့စားမ၀င်တော့ဘူး။
ဒါနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ နာမည်ကြီး စားဖိုမှူးတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ နာမည်ကြီး ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းတီထွင်သူတွေ၊ နာမည်ကြီး မိတ်ကပ်အလှဆင်သူတွေကလည်း မိန်းမတွေထက်စာရင် ယောက်ျားလေးတွေ ပိုများတယ်။
မမိုးချိုသင်း >> ချက်နည်းရေးထားတာ မဟုတ်တော့ အစ်မ ကိုယ်ဟာကိုယ် ချက်စားကြည့်လို့ မရဘူး ဖြစ်သွားတယ် ထင်တယ်။ :D ဒီကို လာလည်ရင်ပြောလေ။ ဆိုင်မှ အ၀ လိုက်ဝယ်ကျွေးမယ်။
Anonymous>> Hindu Temple နားက ဒန်ပေါက် မစားဖူးဘူး။ ဘယ်နားမှာလဲ။ လိပ်စာ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်လိုသွားရတယ် ဆိုတာဖြစ်ဖြစ် ပြောပြနိုင်မယ်ဆိုရင် သွားစားကြည့်ချင်ပါတယ်။
မမွန် >> နေနေ ရေးထားတာကို သဘောကျတယ် လား။ :D မသေချာဘူးလို့ လည်း ဆက်ပြောထားပါတယ်ကွယ်.. :P
PTi >> အနံသိပ်မရှိဘူး။ ညှီလည်းမညှီဘူး။ အဲဒါမို့ စားလို့ ရတယ်။ ဒီနေ့PTi ကို ပြောဖို့ဆိုင် နာမည်ထပ်သွားကြည့်တဲ့ အနေနဲ့အဲဒီမှာ နေ့ လယ်စာ သွားစားလိုက်တယ်။ ဆိုင်နာမည်က Ta Lu Prawn Noodle လို့ သိရတယ်။ နောက်လ ၁၀ ရက်နေ့ဆိုင်က နေရာပြောင်းတော့မယ် ဆိုတာ သလိုက်ရလို့ပြောင်းမယ့် လိပ်စာအသစ်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူလာပြီး အပေါ်က ပိုစ့်မှာ တင်ထားပါတယ်။ :)
Thursday, September 25, 2008 3:01:00 PM
ကျေးဇူးပါပဲ မနေနေနိုင်။ လမ်းကြုံတဲ့အခါသွားစားလို့ရတာပေါ့...
မြန်မာဒန်ပေါက်ဆိုတာ mosque street နဲ့ south bridge road ထောင့်က ဆိုင်ကိုပြောတာထင်ပါတယ်။ ကျောင်းကပွဲတွေများလည်း မှာကျွေးလေ့ရှိတယ်။ စားလို့မဆိုးပါဘူး။
တရုတ်တန်းမှာက mosque street မှာ ကိုရီးယားစာ စားလို့ကောင်းတယ်... :)
Hi , thk for the address.
The shop name is taj maha ( i think so). The owner orgin is from burma. It is on the main road. don't turn left on your chicken rice shop. just go straght after cross small road u can see the shop with green signboard. But i think now their u boke days should be the shops will close.
i like their phaluda.
Thursday, September 25, 2008 10:41:00 PM
ဒန်ပေါက်ဆိုင်ကို သိသလိုပဲ.. လမ်းဒေါင့်မှာရှိတဲ့ မြန်မာလို ကြိုဆိုပါ၏ လို့ရေးထားတဲ့ ဆိုင်ထင်တယ်။ အဲဒီဆိုင်ရှေ့ ကိုမရောက်ဖူးပေမယ့် ဘေးလမ်းက ဆိုင်မှာ တခါတလေ ထမင်းစား သွားစားလေ့ရှိတယ်။ တခါတောင် အလုပ်ကလူတွေကို ဟိုဘက်မှာ မြင်ရတဲ့စာက မြန်မာလို ရေးထားတာဆိုပြီး ပြောမိလိုက်သေးတယ်။ အခုမှ ပြန်မှတ်မိတော့တယ်။ ဒန်ပေါက်စားပြီး ဖာလူဒါသွားသောက်မယ်...
ကိုရီးယားအစားအသောက်ဆို အသားကင်ကို ပိုကြိုက်တယ်။ ခုမှပဲ အဲဒီနားက အစားအသောက်ကောင်းကောင်းရတဲ့ ဆိုင်တွေကို သိရတော့တယ်။ စားဖြစ်အောင် သွားစားကြည့်ပါအုံးမယ်။ သတင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ...
Friday, September 26, 2008 11:10:00 PM